Ny Honor 8 dia manomboka manavao ny Android 7.0 Nougat | Vaovao momba ny gadget
Iray volana izay no nanambaran'ny orinasa ny fananganana ofisialy ny fanavaozana ny Honor 8 ary androany maraina dia niparitaka tamin'ny tambajotra ny vaovao momba ireo fitaovana voalohany nahazo ity kinova vaovao ity tamin'ny OTA. Toy ny nitranga tamin'ny famoahana ny fanavaozana ny rafitra fandidiana teo aloha, ity kinova vaovao ity dia tsy navoaka eran'izao tontolo izao ary vitsivitsy ihany ireoIreo mpampiasa ao Japon dia ireo izay nahazo ny fampandrenesana farany.
Na izany na tsy izany, ny kinova Android Nougat vaovao dia efa natomboka tamim-pomba ofisialy ho an'ireo fitaovana ireo, noho izany dia fotoana fohy monja alohan'ny hanatrehany ireo mpampiasa hafa. Ho fanampin'ity fanavaozana ity dia efa fantatr'ireo mpampiasa fitaovana Honor (Huawei) fa havaozina ihany koa ny sosona fanaingoana. amin'ity tranga ity dia ho tonga ny kinova EMUI 5 vaovao. Ny zavatra tsara indrindra momba ity fanavaozana vaovao ity amin'ny raharahan'ny EMUI dia ny fanatsarana ny fampisehoana fampandrenesana, ny fanatsarana tsara indrindra amin'ny fanjifana bateria ary ny fanohanana ny varavarankely marobe.
Tsy misy angon-drakitra marina momba ny mety hahatongavan'ity kinova vaovao an'ny rafitra fiasa ity amin'ny firenena sisa misy ilay fitaovana, fa ny dingana voalohany dia efa notanterahina, dia ny fandefasana Android 7.0. Androany izao dia ho andro maromaro vao ho tonga amin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana miaraka amin'ireo fanatsarana rehetra entiny amin'ireo fitaovana ireo, manantena izahay fa tsy haharitra ela izany raha mampitandrina izy ireo ao amin'ny kaonty Twitter ofisialin'i Huawei any Japon ary ireo mpampiasa dia afaka manavao ny Honor 8 azy ireo faran'izay haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Manomboka manavao ny Android 8 Nougat ny Honor 7.0
Movistar dia manambara ny fandefasana amin'ny 4K ho an'ny 2017 ary manolotra ny MotoGP Yamaha